ग्रहचक्रमा भोलि हुँदैछ उ’थलपुथल, यी राशिको भाग्यमा हुनेछ व्यापक परिवर्तन ! – Dailny NpNews
ग्रहचक्रमा भोलि हुँदैछ उ’थलपुथल, यी राशिको भाग्यमा हुनेछ व्यापक परिवर्तन !
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ०९, २०७८ समय: ८:३३:०५
एजेन्सी – न्या’य दिलाउने ग्रहको रुपमा रहेको शनि ग्रहले जेठ ९ गते आइतबार चाल परिवर्तन गर्दैछ। त्यसदिन शनि ग्रह मकर राशिमा वक्री हुनेछ। जेठ ९ गते चाल परिवर्तन गरेपश्चात शनि असोज २५ गते सम्म सोहि अवस्थामा रहनेछ। शनि वक्री हुँदा १२ वटै राशिलाई केहि न केहि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। शनिको वक्रीले कुन राशिलाई कस्तो प्रभाव ? हेर्नुहोस्
मेष राशि दशम स्थान यानि कर्म भावमा हुने शनिको गोचरले मेष राशि हुनेहरुको जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। आर्थिक रुपमा स’मस्या बढ्नेछ। ऋण लिने-दिने कार्य सकेसम्म नगरेकै राम्रो होला। कुनै पनि निर्णय लिनु अगाडी गहन छलफल आवश्यक गर्नु उ’चित हुनेछ। अनावश्यक भा’गदौड बढ्दा शारीरिक तथा मानसिक रुपमा क’म्जोर भइने सम्भावना छ।
वृष राशि शनिको चाल परिवर्तनले वृष राशि हुनेहरुको जीवनमा आर्थिक स’मस्या पैदा गर्न सक्ला। अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च बढ्न सक्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यलाई लिएर पनि समस्य क’ठिन रहनेछ। प्रेम जीवन मात्र नभई पारिवारिक जीवनमा पनि अलि बढी नै समस्या उत्पन्न हुनेछन्। शिक्षाको क्षेत्रमा भने सोचेजस्तै प्रगति हुन सक्ला।
मिथुन राशि अष्टम स्थानमा हुने शनिको वक्रीले मिथुन राशि हुनेहरुको स्वास्थ्यमा प्र’भाव पार्नेछ। श्वास-प्रश्वास तथा पाचन सम्बन्धि स’मस्याले सताउनेछ। यात्रा का योजनाहरु पनि रद्द हुने देखिन्छन्। मित्रजनबाटै धोका हुन सकने हुँदा सतर्क रहनु होला। सकेसम्म नयाँ कार्य थालनी पनि नगरेकै राम्रो हुने देखिन्छ।
कर्कट राशि सप्तम स्थानमा हुने शनिको वक्रीले कर्कट राशि परिवारमा क’लह बढाउने देखिन्छ। प्रेम जीवन अथवा दाम्पत्य जीवनमा विभिन्न प्रकारका स’मस्याहरु उत्पन्न हुनेछन्। नगरेका ग’ल्तीले दुख दिनेछन्। झु’ठा आरोप लाग्न सक्ने हुँदा सतर्कता आवश्यक रहला। अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण नभए आर्थिक स’मस्याले पनि स’ताउनेछ।
सिंह राशि शनिको व’क्रीका कारण सिंह राशि हुनेहरुको खर्च बढ्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा स’मस्याहरु देखा पर्लान्। आफ्नो मात्र नभई परिवारका सदस्यहरुको समेत स्वास्थ्यमा स’मस्या देखिने सम्भावना छ। शुक्र वक्री पश्चात शत्रु हा’वी हुने पनि देखिन्छ। सकेसम्म टाढाको यात्रा नगरेकै राम्रो होला।
कन्या राशि शुक्रको वक्रीका कारण कन्या राशि हुनेहरुको बौ’द्धिक पक्षमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। प्र’तिष्पर्धाहरुमा सहजै सफल हुन सकिनेछैन। विद्यार्थीहरुका लागि समय क’ठिन हुनेछ। बोलि तथ्य व्य’वहारमा नियन्त्रण आवश्यक पर्नेछ। बो’लिका कारण आ’लोचित भइनेछ। सोच-बिचार नगरी उ’ठाइएका क’दमले नसोचेको नो’क्सान गराउनेछ।
तुला राशि शुक्रको वक्रीले तुला राशि हुनेहरुलाई विभिन्न प्रकारका त’नाव दिने देखिन्छ। परिवारमा भएको क’लहले नसोचेको रुपमा लिन सक्छ। प्रेमि-प्रेमिकासँगको सम्बन्धमा पनि द’रार आउनेछ। का’नुनी रुपमा पनि स’मस्या बढ्नछ। साथै यात्रा पनि प्र’भावित हुन सक्ला। सवारी साधन च’लाउँदा अलिबढी नै साव’धानी आवश्यक रहला।
वृश्चिक राशि शुक्रको वक्रीका कारण वृश्चिक राशि हुनेहरुको पराक्रममा ह्रास आउने देखिन्छ। कुनै पनि कम गर्ने जाँगर हुनेछैन। गरेका हरेक कार्य असफल हुँदा थप प्रयास गर्नबाट मन वि’चलित हुनेछ। दाजु-भाइ, दिदी-बहिनीहरुको सम्बन्ध बि’ग्रन सक्ला। अन्वाश्यक रुप्प्मा रि’स उ’ठ्नाले कार्यक्षेत्रमा ठूलै न’कारात्मक प्र’भाव पार्ने देखिन्छ।
धनु राशि द्वितीय स्थानमा हुने शनिको वक्रीले धनु राशि हुनेहरुको आर्थिक जीवनमा सताउनेछ। आम्दानीका सबै बाटोहरु ब’न्द हुनेछन्। व्यवसायमा नसोचेको नो’क्सान हुन सक्ला। आर्थिक अभावका समयमा आफन्तजनबाट आशा गरेजस्तो सहयोग नमिल्दा मा’नसि’क त’नाव बढ्नेछ। त्यस्तै शनिको वक्रीले स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। आँखा सम्बन्धि स’मस्या रहन सक्ला।
मकर राशि शनिको वक्री पश्चात मकर राशि हुनेहरुलाई अनेक स’मस्याले स’ताउनेछन्। नजिकका आफन्त, प्रेमि-प्रेमिका, मित्रजनसँगको सम्बन्धमा ठूलो द’रार आउनेछ। नसोची बोल्ने बानिले स’मस्यामा पार्न सक्ला। स’मस्यमा निर्णय गर्न नसक्दा बन्न लागेका कार्य समेत बि’ग्रनेछ्न्। कार्यक्षेत्रमा पनि वि’वाद हुने सम्भावना छ। सकेसम्म आर्थिक ले’न-देन नगर्नुहोला।
कुम्भ राशि शनिको वक्रीका कारण कुम्भ राशि हुनेहरुको आर्थिक पक्ष अलि बढी नै प्र’भावित हुनेछ। लगानीको विषयलाई लिएर साझेदारी गरिएकाहरुसँग वि’वाद हुनेछ। रोजगारीको क्षेत्रमा पनि वि’वाद हुन सक्ला। कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न शुभ हुने देखिँदैन। यात्राको अवसर मिलेपनि केहि प्रतिफल प्राप्त हुनेछैन। हाड-जो’र्नी सम्बन्धि स’मस्याले सताउन सक्ला।
मीन राशि शनिको वक्री एकादश स्थानमा हुँदा मीन राशि हुनेहरु आर्थिक स’मस्याबाट गुज्रन बा’ध्य हुनेछन्। गरिएका लगानी डु’ब्ने सम्भावना छ। नयाँ क्षेत्रमा सकेसम्म लगानी नगरेकै उ’चित होला। खर्चमा नियन्त्रण नहुँदा प’छुताउनुपर्नेछ। बहुमुल्य समान ह’राउन सक्ने हुँदा सतर्क रहनु होला। त्यस्तौ टाढाको यात्रा गर्नको लागि पनि सहज हुने देखिँदैन। राज्यबाट कार्यस्थलमा अ’वरोध हुनेछ।